Nagu saabsan | HEBEI XINTELI CO., LTD
Hebei Xinteli waa shirkad da 'yar oo ku takhasustay soo dejinta iyo dhoofinta, waxaana laga soo qaatay dib-u-habeynta qaab-dhismeed ee shirkadaha ganacsiga shisheeye ee hore. Hebei Xinteli waxaa la aasaasay bishii Sebtember 2008, waxayna noqoneysaa tan ugu sarreysa dhoofinta Gobolka Hebei ee Macdanta iyo Macdanta. . Noocyada kaladuwan ee Hebei Xinteli waa mesh silig (mesh silig laba geesle ah, mesh silig mesh), xayndaabka biraha (xayndaabka beerta, xayndaabka holland), alaabada beerta, alaabada birta iyo alaabada qalabka.Waxaan u adeegsanaa waxyaabo tayo sare leh sida biraha kaarboon hooseeya. waxay bixin karaan daaweyn fara badan oo kala duwan.Waxay yihiin galvanized, PVC dahaarka leh, galvanized la PVC coated.The alaabta si taxaddar leh loo hubin doonaa ka hor dhalmada, si ay u bixiyaan tayada ugu fiican ee macaamiisheena.
Badeecadaheenna waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa beeraha protection ilaalinta xoolaha 、 jardiinooyinka iwm Baaxaddayada ganacsigeenna sidoo kale waxay daboolaysaa soo dejinta iyo dhoofinta noocyo badan oo noocyo kala duwan ah iyo farsamooyin ah. Waxaan u dhaqaaqeynaa dhoofiyaha ugu sarreeya ee gobolka Hebei ee alaabada birta iyo beeraha.
Sanadihii ugu dambeeyay, Hebei Xinteli wuxuu diirada saarayay cilmi baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub. Iyada oo loo marayo hawlgallo cusub, kala duwanaanta wax soo saarkayagu si joogto ah ayaa loo ballaariyay. Shabakadeena iibka ayaa sidoo kale si weyn loo xoojiyay. Wax soo saarkayagu hadda si guul leh ayaa loogu suuq geeyay suuqyada adduunka gaar ahaan Yurub Europe United States of America 、 Waqooyiga Ameerika 、 Afrika- IWM Meheradda hadda jirta ee Hebei Xinteli waxay ku horumaraysaa tallaabooyin joogto ah.
Hebei Xinteli wuxuu leeyahay koox aad u fiican oo riyooyin qabta, oo ay ka buuxaan hami, firfircooni iyo hal-abuur. Waxaan aaminsanahay, dadaallada wadajirka ah ee dhammaan xubnaha, Hebei Xinteli hubaal inuu noqon doono shirkad caan ka ah warshadaha ganacsiga shisheeye ee Hebei.
Hebei Xinteli wuxuu leeyahay koox aad u fiican oo riyooyin qabta, oo ay ka buuxaan hami, firfircooni iyo hal-abuur.